विदेशमा रहेका नेपालीलाई कोरोनाले पारेको समस्याः हेर्नुहोस यस्तो छ परदेशको सन्देश
अधिकांश भन्छन–‘आफ्नो देश फर्कन पाए हुन्थ्यो’
प्रकासित मिति : २०७६ चैत्र ९, आईतवार प्रकासित समय : ०९:५८
काठमाडौं । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट हालसम्म ११ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ । चीन, दक्षिण कोरिया, इरान, इटाली, स्पेन, फ्रान्स, बेलायत, पोर्चुगल, अमेरिकालगायतका देश धेरै प्रभाविदेशमा रहेका नेपालीलाई कोरोनाले पारेको समस्याः हेर्नुहोस यस्तो छ परदेशको सन्देशवित बनेका छन् । कुवेत, माल्दिभ्स, कतारलगायतका मुलुक पनि कोरोनाबाट प्रभावित बनेका छन् ।
यी देशमा लाखौँ नेपाली नागरिक छन्, जो यतिवेला कोरोना संक्रमणको त्रासमा छन् । त्यहाँ रहेका नेपालीको अवस्था कस्तो छ ? पूरै देश र सहरले यो विपतको सामना कसरी गरिरहेका छन् ? नेपालीले के कस्ता समस्या व्यहोरिरहेका छन् र नेपाल सरकारसँग उनीहरूको अपेक्षा के छ ? यी विषयमा कोरोना प्रभावित देशमा रहेका नेपाली नागरिकले आफ्नो समस्या र सन्देश यसरी सुनाएका छन् ।
केशव शर्मा, क्यानडाः रेस्टुरेन्टमा काम गर्नेहरू बेरोजगार
ती सीमा अहिले बन्द गरिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरिएका छन् । डोमेस्टिक उडान भने कायम छन् । मान्छेका मुभमेन्ट धेरै कम भइसकेको छ । टोरेन्टो, भ्यानकोभरमा कफ्यु लागेजस्तै छ । क्यालगरी, एडमन्टन पनि सुनसान छ । रेस्टुरेन्ट प्रायः बन्द छन् । फिल्म हल, पब चलेका छैनन् । २०, २५ जनाभन्दा बढी जम्मा हुन दिइएको छैन । प्राथमिक तहदेखि विश्वविद्यालयसम्मका शिक्षण संस्था बन्द छन् ।
रामराज शर्मा, लन्डन, बर्नमाउथः ज्येष्ठ नेपाली नागरिक जोखिममा छन्
रमेश कँडेल, पोर्चुगल लिस्वनः कम्पनीहरूले धमाधम कामदार निकाल्दै
सरोज चापागाईं, माल्दिभ्सको मालेः बिपत्तिका वेला देश फर्कन नपाउने
दुर्गा पंगेनी, कतार, इन्डस्ट्रियल एरिया, सनैयाः डिपोर्ट गरिएका २५० नेपालीलाई किन क्वारेन्टाइनमा राखिएन ?
यसबीचमा २५० नेपालीलाई कतार सरकारले डिपोर्ट गयो । लक्ड डाउन गरिएको सिटीको कानुन तोडेकाले उनीहरू डिपोर्ट गरिएका हुन् । तर, यहाँबाट डिपोर्ट गरिएका नेपाली अहिले कहाँ छन् ? यो गम्भीर कुरामा सरकारले ध्यान दिएन । उनीहरू लक्ड डाउन सिटीका विभिन्न स्थानमा घुमिरहँदा पक्राउ परेका थिए । अर्थात् संक्रमणको जोखिममा थिए । नेपाल सरकारले उनीहरूलाई विमानस्थलबाटै क्वारेन्टाइनमा लगेर राख्नुपथ्र्यो ।
कृष्णचन्द्र तिमल्सिना, मलेसियाः सेवासुविधा कटौती हुँदै छ ?
सन्तोष न्यौपाने, बेल्जियम ब्रुज सहरः कामदारलाई १४५० युरो बेरोजगार भत्ता खै ?
अशोक पोखरेल, इटालीको सेरारः अस्पतालमा बेड अभाव छ, संक्रमणको जोखिम बढ्दै छ ?
युरोप आफैँ एउटा देशजस्तो छ । युरोपका देशबीच ‘मुभमेन्ट’ बढी भएकाले फैलिन सहज भयो जस्तो लाग्छ । इटालीमा कति नेपाली छन् भनेर आधिकारिक डाटा छैन । यहाँ रहेका विभिन्न संघसंस्थाले १५, १६ सय नेपाली रहेको बताउँछन् । तर, यो आधिकारिक होइन । यहाँ दूतावास छैन । स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा रहेको नेपाली दूतावासले इटाली पनि हेर्छ । त्यसैले सीधा सम्पर्क गर्न कठिनाइ परिरहेको छ । एक वर्ष तीन महिनाअघि म इटाली आएको हुँ । मेडिकल फिजिक्स पढिरहेको छु । हाल अस्पतालमा इन्टनसिप गर्छु । युनिभर्सिटी बन्द छन् ।
गणेश पाण्डे, पोर्चुगल लिस्वनः धेरै नेपाली समस्यामा पर्नेछन
मोहन खड्का, कुवेतः कुवेतमा धमाधम रोजगार गुम्दै छ
आफ्नो देश फर्कन पाए हुन्थ्यो भन्नेचाहिँ लागिरहेको छ । तर, अब त सरकारले जान रोक लगाइदिएको छ । हामी परदेशमा बसेकाहरूलाई सरकारले साँच्चै परकै ठानेको हरेछ भन्ने आभास भएको छ ।
(यो समाचार सामाग्री आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।)